Iingcebiso kunye namaqhinga |
Sifanele senze ntoni phambi SMT le PCBs ngexesha inkqubo indibano PCB?
Sifanele senze ntoni phambi SMT le PCBs ngexesha inkqubo indibano PCB? I-PCBFuture ine-smt yokuhlanganisa umzi-mveliso, onokubonelela ngeenkonzo zendibano ye-SMT yezona zinto zincinci zephakheji engu-0201. Kukuxhasa iindlela ezahlukeneyo zokulungisa ezinjengendibano ye-PCB yokujika kunye neenkonzo ze-pcba ze-OEM. Ngoku, ndiza ...
Iimeko eziqhelekileyo ezinengxaki yoyilo lweBGA kwiPCB / PCBA
Sisoloko sihlangana ne-BGA soldering kwinkqubo yenkqubo yendibano ye-PCB ngenxa yoyilo olungalunganga lwe-PCB emsebenzini. Ke ngoko, i-PCBFuture iyakwenza isishwankathelo kunye nokwazisa amatyala aliqela ayingxaki yoyilo kwaye ndiyathemba ukuba inokubonelela ngezimvo ezifanelekileyo kubayili bePCB! Kukho ikakhulu t ...
Umgangatho webhontshisi ye-tin kwibhodi ye-PCBA
Umgangatho owamkelekileyo wobungakanani bead bead kwibhodi yePCBA ngaphezulu. 1.The sangqa ibhola tin ayidluli 0.13mm. 2. Inani leetini ezinobubanzi obungu-0.05mm-0.13mm ngaphakathi ku-600mm alidluli kwi-5 (icala elinye). 3. Inani leetini ezinedayimethi ...
Inkqubo yemveliso ibandla PCB
PCBA ibhekisa kwinkqubo yokukhwela, ukufaka kunye nokufaka i-soldering i-PCB. Inkqubo yokuveliswa kwePCBA kufuneka ihambe kuthotho lweenkqubo ukugqibezela imveliso. Ngoku, i-PCBFuture iya kwazisa ngeenkqubo ezahlukeneyo zemveliso ye-PCBA. Inkqubo yemveliso PCBA zingahlulwa ...
Indlela ukukhetha umenzi ibandla PCB?
Abathengi abaninzi bebengayazi indlela yokukhetha xa befuna iifektri zePCBA. Zininzi kakhulu iifektri zebandla lePCB, kwaye ngaphezulu kubonakala ngathi ziyafana. Ke singayifumana njani indawo efanelekileyo yePCBA mveliso? Kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe umzi-mveliso we-PCBA onemveliso efanelekileyo ...
Kutheni ukhetha i-PCBFuture yeNdibano yePBototype
ngomphathi ku 20-10-20
1. Isiqinisekiso samandla somasifundisane we-SMT: singenise oomatshini bokubeka ngaphandle kunye nezixhobo zokuhlola ezibonakalayo ezininzi, ezinokuvelisa amanqaku azizigidi ezi-4 ngosuku. Inkqubo nganye ixhotyiswe ngabasebenzi be-QC ukuze kugcinwe umgangatho wemveliso. Imveliso ye-DIP: Kukho oomatshini ababini be-soldering. ...
Ngubani onokubonelela ngenkonzo yeNdibano ye-PCB yeebhodi zolawulo kumashishini
I-PCBFuture ngumvelisi we-PCBA OEM obonelela ngobuchule bokuvelisa i-PCB, ukuthengwa kwempahla, iPCBA yokumisa imveliso ngokukhawuleza kunye nezinye iinkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye nabathengi. Inokubonelela ngeenkonzo ze-PCBA OEM zeepaneli zolawulo lweshishini. Ishishini le-PCBA libandakanya ubunzima be-EMS kunye ne-OEM proce ...
Ungayi-odola phi i-PCBA yomzekelo okhawulezayo
I-PCBFuture ngumvelisi we-PCBA wokulungisa kunye nomzi mveliso webhodi yePCB kunye nefektri ye-chip ye-SMT. Inokubonelela ngeenkonzo zokufunda kwakhona ezikhawulezayo ze-PCBA kubathengi. Ngoku, ndiza kwazisa i-PCBA ngobuchule bokukhawuleza kunye neenkqubo. I-PCBA yokukwazi ubungqina bokukhawuleza: I-PCBFuture ine-componen eyi-10 yobungcali ...
Uqinisekisa njani ukuba izinto ze-elektroniki zezokuqala
I-PCBFuture ngumenzi we-PCBA oqeqeshiweyo onokubonelela ngeenkonzo ze-PCBA OEM ezinje nge-PCB yokuvelisa, ukuthengwa kwecandelo, ukuqhubekeka kwenkqubo ye-SMT, ukucwangciswa kwe-DIP plug-in, ukuvavanywa kwendibano, njlnjl. yoqobo? Yiza ...
Kuya kuba nini ixesha lokuhambisa emva kokuba abathengi be-odola iibhodi ze-PCBA?
Ixesha lokuhanjiswa kwe-PCBA lisondele kakhulu kwimisebenzi yangaphambi kokusebenza. Abathengi kufuneka babonelele ngezi zinto zilandelayo kuqala. Iimpahla zinokuhanjiswa zingadlulanga iintsuku ezi-3 emva kokuba zonke izinto zigqityiwe. Ukuba kukho ukuqhubekekiswa kwe-DIP, kuya kuthatha iintsuku ezingama-5-7 ukuhanjiswa. Ukuba unemiyalelo engxamisekileyo enokuthi ...
Iinkampani zinokuzinciphisa njani iindleko zendibano ze-SMT
Okwangoku, i-China ibe yindawo yokuvelisa kwihlabathi liphela. Ukujongana nokhuphiswano lwentengiso, indlela yokuqhubeka nokuphucula umgangatho wemveliso, ukunciphisa iindleko zemveliso, ukuphucula ukusebenza kwayo, kunye nokunciphisa amaxesha okuhola yinxalenye ephambili yolawulo lwenkampani yokuvelisa. I-SMT yitekhnoloji yendibano yomphezulu ...
Kubaluleke kakhulu ukukhuselwa kwe-ESD kwinkonzo yendibano ye-elektroniki
Zininzi izinto ezichanekileyo zombane kwiibhodi zebandla lePCB, kwaye izinto ezininzi zinobuzaza kumbane. Umothuko ophezulu kunombane obekiweyo uya konakalisa ezi zinto. Nangona kunjalo, i-PCBA eyonakaliswe ngumbane ongashukumi kunzima ukuphanda inyathelo ngenyathelo ngexesha lovavanyo olusebenzayo. ...